Anigu waxaan ahay qof uur leh. Mana DOONAYO in aan ilmo dhallo. Maxaa ila gudboon in aan hadda sameeyo? – Tips for refugees
Anigu waxaan ahay qof uur leh. Mana DOONAYO in aan ilmo dhallo. Maxaa ila gudboon in aan hadda sameeyo?
Waxaa laguu oggolyahay in aad go’aansatid haddii aad doonaysid in aad ilmaha dhashid iyo haddii kale oo aadan doonaynin.
Waxaad arintaasi kala hadli kartaa qof aad ku kalsoontahay.
Laakiin waa in aad adiga gaartid go’aankaaga khaaska kuu ah.
Waxaa laguu oggolyahay in aad joojisid uurka.
Midaasi waa mid lagu oggolyahay waddanka Jarmalka.
Laakii waa kaliya marka uurjiifka calooshaada ku jira uu weli yahay mid aad u yar.
Marka uu yahay uurkaagu mid ka yar seddex bilood.
Haddii aad tahay qof ka yar da’da 18 sanno oona doonaysid in aad samaysid qaliin lagu sameeyo hoosta qurxinta guud,
Waxaa khasab kugu ah in aad oggolaansho ka heshid waalidkaaga ama masuulkaaga sharciga ah.
Waxaa khasab kugu ah in aad hore u booqatid xarunta tallo bixinta uurka.
Ka fiiri halkan xarunta tallo bixinta: http://www.familienplanung.de/beratung/beratungsstellensuche
Ma ahan in aad cabsatid. Ayagu kaliya way kula hadli doonaan.
Waxaad u sheegi kartaa sababta aad u doonaysid in aad joojisid uurka.
Kadibna waxaad qaadan doontaa xaqiijin sheegaysa in aad booqatay xarunta tallo bixinta.
Waad u baahantahay xaqiijintaan si aad u samaysid ilma soo ridida.
Sidoo kale ayagu waxay kusiin doonaan cinwaanka dhakhtarka ama isbitaalka.
Meel aad ka heli kartid daaweyn ammaan ah.
Ha isku dayin qaab kale in aad samaysid. Midaasi waxay noqon kartaa mid halis ah.
Haddii uurjiifku yahay mid goor horeba ka weynaaday 3 bilood, waxaa khasab kugu noqonaya in aad dhashid ilmahaasi.
Kadibna waxaa laguu oggolaanayaa in aad ilmaha siisid dad korsada.
Xafiiska daryeelka dhallinyarada ayaa u raadin doona waalidiin ilmaha yar.
Posted on July 19, 2016 Author editorialteamCategories Pregnancy - Schwangerschaft
Previous Previous post: Da’dee la ii oggolyahay in aan galmo sameeyo?
Next Next post: Waxaan jeclahay in aan la saaxiibo gabar Jarmal ah. Maxaa ila gudboon in aan sameeyo?